Uhlalutyo lukaGoogle: Iimpawu zeNgxelo eziBalulekileyo zokuThengisa uMxholo | Martech Zone
Uhlalutyo lukaGoogle: IiMetric zeNgxelo eziBalulekileyo zokuThengisa uMxholo
NgeCawa, ngoJulayi 17, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 UJeremy Durant
Igama elithile ukuthengiswa kokuqukethwe kunokuba buzzworthy kwezi ntsuku. Uninzi lweenkokheli zeenkampani kunye nabathengisi bayazi ukuba kufuneka benze intengiso yomxholo, kwaye uninzi luye lwaya kuthi ga ekudaleni nasekusebenziseni isicwangciso.
Umcimbi ojamelene neengcali ezininzi zentengiso yile:
Silandela njani kwaye sikulinganise ukuthengisa umxholo?
Sonke siyazi ukuba ukuxelela iqela le-C-Suite ukuba kufuneka siqale okanye siqhubeke nokuthengisa umxholo kuba wonke umntu uyayenza ayizukuyisika. Zininzi iindlela zokulinganisa ezinokubangela ukuqonda kwimizamo yokuthengisa umxholo, yintoni esebenzayo, engasebenziyo, kwaye apho kukho izithuba.
Nokuba isicwangciso sakho sedijithali sibandakanya isicwangciso sokuthengisa esicacileyo somxholo, ngokuqinisekileyo kuya kufuneka ulandele indlela yokusebenza kwewebhusayithi yakho. Indawo yewebhu sisiseko saso nasiphi na isicwangciso sentengiso, nokuba isicwangciso siqala nje okanye sikhulile.
Uhlalutyo lukaGoogle sisixhobo esilula sokulandela umkhondo sokuseta kwaye sinikezela ngokusebenza kunye nolwazi oluninzi. Kusimahla, kulula setha iGoogle Analytics, Kwaye yenza abathengisi ukuba bakwazi ukulandelela umxholo kunye nokuvavanya ukuba umxholo usebenza njani.
Xa uvavanya isicwangciso sokuthengisa umxholo (okanye ulungiselela ukwenza isicwangciso), kulungile ukuqala ngeziseko-ukugcwala ngokubanzi kumaphepha ewebhusayithi. Le ngxelo iphantsi Ukuziphatha> Umxholo weSiza> Onke amaphepha.
Eyona metric iphambili apha ngumthamo omkhulu wokundwendwela amaphepha aphezulu. Ikhasi lasekhaya lihlala lityelelwa kakhulu, kodwa kuyathakazelisa ukubona eyona nto ifumana ukugcwala kwabantu ngaphaya koko. Ukuba unesicwangciso esiliqili sokubloga (iminyaka emi-5 nangaphezulu), iibhlog ziya kuba lelona phepha lilandelayo lityelelweyo. Le yindawo entle ukubona ukuba umxholo usebenza njani ngexesha elithile (iiveki, iinyanga okanye iminyaka).
Ixabiso eliphakathi labakhenkethi abalichitha kwiphepha libonelela ngengcaciso malunga nokuba iphepha liyabandakanyeka na.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba olona phepha lutyelelweyo alusoloko lungamaphepha abandakanyekayo. Hlela ngo-Avg. Ixesha kwiPhepha ukubona ukuba ngawaphi amaphepha anexesha eliphezulu elichithwe kwiphepha. Amaphepha ajonge iphepha eliphantsi (2, 3, 4) anokujongwa ngokungaphezulu njengeziphene. Nangona kunjalo, ezinomdla ngamaphepha aneembono ezingaphezulu kwe-20 +.
Njengoko ujonga ukuba zeziphi izihloko ekufuneka zibandakanyiwe kwikhalenda yakho yokuhlela umxholo, kubalulekile ukuba ujonge ukuba ngawaphi amaphepha afumana owona mthamo mkhulu wezithuthi (athandwayo) kwaye ngawaphi amaphepha anexesha eliphezulu kumaphepha (abandakanyekayo). Ngokufanelekileyo, ikhalenda yakho yokuhlela kufuneka idityaniswe zombini.
Ngelixa sinokufumana i-granular in yokulandelela kunye nokulinganisa iinzame zentengiso, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba isicwangciso-qhinga sentengiso kukuqhuba kunye nokuguqula izikhokelo zabaxhasi abatsha. Ukuguqulwa kunokulandelwa kusetyenziswa iiNjongo kuGoogle Analytics phantsi Ulawulo> Jonga.
Uhlalutyo lukaGoogle luvumela kuphela iinjongo ezingama-20 ukuba zilandelelwe ngexesha, ke sebenzisa oku ngobulumko. Eyona ndlela ilungileyo kukulandela umkhondo wokungeniswa kwefom ye-Intanethi, ukubhaliswa kweleta, ukukhutshelwa kwamaphepha amhlophe, kunye nayo nayiphi na into enokubonisa ukuguqulwa kwendwendwe kwiwebhusayithi.
Iinjongo zinokujongwa phantsi Ukuguqula> Iinjongo> Ushwankathelo kuGoogle Analytics. Oku kubonelela ngesishwankathelo ngokubanzi sendlela iziqwenga zomxholo kunye namaphepha akho aqhuba ngayo ekukhokeleni.
Umthombo wendlela kunye noPhakathi
Umthombo wezithuthi kunye noPhakathi ziimetrikhi ezinkulu zokwazisa ngendlela yokuhamba kwabantu kwiwebhusayithi yakho kunye namaphepha omxholo. La manani abaluleke kakhulu ukuba uqhuba unyuselo oluhlawulelweyo kwiiMithombo ezinje ngeNtengiso zikaGoogle, i-LinkedIn, iFacebook, iiNtengiso ezisekwe kwiAkhawunti, okanye ezinye iinethiwekhi zentengiso. Uninzi lwezi ndlela zentengiso zihlawulelwayo zibonelela ngedashboard yeetriki (kwaye zibonelela ngeepikseli zokulandela umkhondo), kodwa owona mthombo wolwazi lokwenyani uqhelekile kuGoogle Analytics.
Funda ukuba uguquko luvela phi kwinjongo nganye ngokujonga Ukuguqula> Iinjongo> Ukuhamba kweenjongo ingxelo. Unokukhetha iNjongo ofuna ukuyijonga kunye noMthombo / oPhakathi wokufezekiswa kwenjongo (uguquko). Oku kuya kukuxelela ukuba zingaphi kwezo zikhokelo ezivela kuGoogle Organic, ngqo, kwi-CPC, kwi-LinkedIn, kwi-Bing CPC, njl.
Ukujonga ngokubanzi ukuba imithombo eyahlukeneyo iyiphembelela njani kwimizamo yakho yokuthengisa umxholo Ukufunyanwa> Zonke izithuthi> Umthombo / Phakathi.
Le ngxelo yenza ukuba umthengisi abone ukuba yeyiphi imithombo kunye neeMediamu eziqhuba elona nani likhulu lokuguqulwa kweenjongo. Ukongeza, ingxelo inokwenziwa ngobuqhetseba ukubonisa ukuba uguquko luvela phi kwinjongo nganye (efanayo nengxelo yokuNgena kweNjongo). Qiniseka ukuba ujonga iphepha / iseshoni, Avg. Ixesha leseshoni, kunye neNqanaba lokuBuyisa kula maphepha nawo.
Ukuba uMthombo / ophakathi unezinga eliphantsi lokuguqula, amaphepha asezantsi / iseshoni, Umgangatho ophantsi. Ixesha leseshoni kunye nenqanaba lokubhabha okuphezulu, lixesha lokuba uvavanye ukuba ngaba uMthombo / oPhakathi lulondolozo oluchanekileyo lwexesha kunye nezixhobo.
Uluhlu lwamagama aphambili
Ngaphandle kohlalutyo lukaGoogle, kukho uluhlu lwezixhobo ezihlawulwayo ukulandelela i-SEO kwaye Uluhlu lwamagama aphambili. Uluhlu lwamagama aphambili aluncedo ekumiseleni ukuba zeziphi iziqwenga zomxholo oza kuzenza kunye nokuba ngabaphi abathengi abanokubakhangela xa bekwi-intanethi. Qiniseka ukudibanisa eyakho Iakhawunti yokuKhangela kuGoogle ngokuHamba kuGoogle. Abaphathi bewebhu banokunika iinkcukacha malunga nokuba ngawaphi amagama aphambili aqhuba ukugcwala kwezinto eziphilayo kwindawo yakho.
Izixhobo eziphambili ze-SEO zibandakanya Semrush, gShift, Ahrefs, I-BrightEdge, Ukuqhuba, yaye moz. Ukuba ungathanda ukunyusa umgangatho wamagama athile aphambili (kwaye ufumane ukugcwala ngakumbi kwala magama), yenza ubugcisa kunye nokukhuthaza umxholo malunga naloo migaqo.
Zeziphi iingxelo kunye neemetrikhi ozisebenzisayo ukuvavanya nokwazisa isicwangciso sakho sokuthengisa umxholo?
UJeremy Durant yiNqununu yeShishini kwi-Bop Design, a Uyilo lwewebhu lweB2B kunye nentengiso yedijithali. UJeremy usebenza ngokusondeleyo namashishini afuna iwebhusayithi, isicwangciso sentengiso kunye negama, ebanceda ukuba baphuhlise isindululo sexabiso labo esikhethekileyo kunye neprofayili yomthengi efanelekileyo. UJeremy wafumana i-BA yakhe kwiKholeji yaseMerrimack kunye ne-MBA yakhe kwiYunivesithi yaseCalifornia State, eSan Marcos. Ukubhala kwakhe kubonisiwe kwi-CMS Wire, kwiZiko lokuThengisa kwi-Intanethi, kwiMagazini ye-EContent, kwiNtengiso ye-B2B, kwiArhente yokuThengisa ngaphakathi, kwiMagazini yokuBonakala, nakwiSpin Sucks.
Iingcebiso ezili-10 zokuLungelelanisa ukuThengisa nge-imeyile kunye neMithombo yeendaba yeNtlalo
Uphononongo oluceliweyo okanye oluhlawulelweyo luphononongo olunobungozi